Wargayska Kenya ugu afka dheer oo Dowladda Kenya usoo jeediyey 5 qodob oo ay ku wanaajin karto xiriirka Somalia (Tillaabooyinka la faray inay qaaddo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Wargayska Kenya ugu afka dheer oo Dowladda Kenya usoo jeediyey 5 qodob...
Wargayska Kenya ugu afka dheer oo Dowladda Kenya usoo jeediyey 5 qodob oo ay ku wanaajin karto xiriirka Somalia (Tillaabooyinka la faray inay qaaddo)
(Nairobi) 19 Luulyo 2021 – Warqaadka Daily Nation ayaa qoray warbixin dheer oo ku saabsan sida loo wanaajin karo xiriirka Somalia iyo Kenya oo haatan la wado dadaallo dib loogu dhisayo.
Waxaa warbixinta lagu sheegay in joojinta Jaadka Miraa oo ay Kenya sanadkii ka heli jirtey 20bilyan oo shilin uu si xun u waxyeelleeyey dadka reer Meru oo awalba la tacaalayey mamnuucidda Galbeedka Yurub iyo Woqooyiga Ameerika, balse ay Kenya la safatay dadka dhoofinaya dhuxusha sharci darrada ah ee Kismaayo laga diro, taasoo bannaanka dhigtay reer Meru.
Wuxuu qoraalku si gaar ah ula hadlayaa Kenya oo uu farayo inay qaaddo dhowr tillaabo:
1 – Kenya waa inay joojisaa aragtida ah “waxaan caawinnay Somalia, marka abaal baan ku leennahay” oo ay qaadataa aragti cusub oo ah in ay Somalia ula dhaqantaa qaab ku dhisan xushmad iyo jaalnimo siman.
2 – Kenya kama fili karto Somalia, walow ay hadda daciif tahay, inaysan wax walaac ah ka muujinin taageerada aan hakadka lahayd ee ay Kenya siiso MW Jubaland State, Ahmed Mohamed Islam (Madobe).
3 – Kenya waa inay sidoo kale faraha kala baxdaa taageerada madaxda Maamul-goboleedyada Somalia guud ahaan, kuwaasoo xiriirka u jara DF Somalia.
4 – Nairobi waa inay sidoo kale xirtaa xafiisyada kooxaha dowlad la’aanta ka macaasha ee iskugu jira NGO-yo iyo sharikaad kala duwan, kuwaasoo malaayiin doollar ku hela inay horumarinayaan dimoqraadiyadda Somalia, balse runtii maalgeliyo xasillooni darrada Somalia.
5 – MW Uhuru Kenyatta iyo Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo waa inay wax kasta u sameeyaan abuurista saldhig adag oo iskaashi iyo ganacsi ah oo dhexmara labada dal.
Previous article2-aragtiyood oo kusoo kordhay aragti horay loo sheegay inay eersatay Ikraan Tahliil oo haatan la la’yahay bil ku dhowaad (Dilka siyaasiyiin waawayn oo…)
Next articleDakhli ay DF Somalia heli jirtey oo kordhay & hal caqabad oo xallin u baahan si lacag ka badani usoo xarooto